In Bayern heshiiska shaqsiga ah la gaartay Sane, qiimaha ay wada hadalka Man City ku billawday iyo sheeko walba oo ku saabsan heshiiskaas – Gool FM
(Munich) 06 Maaajo 2020. Warsidaha Jarmalka ka soo baxa ee SportBild ayaa tibaaxaya in kooxda Bayern Munich ay aad ugu dhowdahay ka guul gaaridda saxiixa Leroy Sane iyagoo heshiiska shaqsiga ah la gaaray, sidoo kalena ay isku af garteen qandaraas gaaraya shan sano.
SportBild ayaa sidoo kale ku warramaya in heshiiska Bayern ay la gaartay Sane uusan ahayn tallaabada kaliya ay qaadday kooxda Jarmalka ah, balse waxay wada hadallo la billawday kooxda Manchester City iyagoo wada-xaajoodka ka billaabay qiimo gaaraya 40 milyan oo euro, inkastoo gor goris kaddib la filayo inay ku dhammeystiri karto qiyaastii 60 milyan oo euro.
Su’aal kama taagna qiimaha ay kooxda Bundesliga difaacaneysa ku dooneyso saxiixa laacibka garabka kaga ciyaara Man City inuu ka hooseeyo halkii uu u qalmay, balse waxaa u wacan labo arrin oo muhiim ah.
Tan koowaad ayaa ah in kubadda cagta ay la tacaaleyso suuqa kala iibsiga xagaagan si ka duwan sidii hore kaddib dhibaatooyinka dhaqaale ee uu horseeday cudurka coronavirus.
Tan labaad ayaase ah in Leroy Sane uu labo xaaladood kulansaday oo kala ah in qandaraaskiisa uu galayo sanadkii u dambeeyay iyo inuu dhaawac daran soo gaaray horraan xilli ciyaareedkan taasoo keentay inuusan wax kubbad ah ciyaarin tan iyo bishii Agoosto ciyaartii ay la ciyaareen kooxda Liverpool ee koobka Community Shield.